အမေရိကန်ရဲ့ ၄၅ဦးမြောက် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဖြစ်လာ
တီကျစ် ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ လုပ်ငန်း ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆို
ရခိုင်အရေးကို မလေးရှားက နိုင်ငံရေးအတွက် အသုံးချနေဟု မြန်မာပြော
ရန်ကုန်စတော့ဈေးကွက် အဆောက်အဦးအပြင်ဘက် ဂျာနယ်ဖတ်နေသူတဦး / Reuters
By James Hookway 24 January 2017
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း သို့မဟုတ် အများသိကြသည့် YSX (Yangon Stock Exchange) တွင် တနေ့တာ အရောင်း အဝယ်ကျဆင်းမှုကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ကေဘယ် ရုပ်မြင်သံကြားရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ နေ့စဉ်ရောက်ရှိလာသည်။ ၎င်း၏အစီရင်ခံစာမှာ ထုံးစံအတိုင်း တိုတောင်းလှသည်။
မြန်မာစတော့ဈေးနှုန်းအညွှန်းကိန်း MYANPIX သည် ၂ ရက်ဆက်တိုက် အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ စုစုပေါင်းရောင်းဝယ်မှု ပမာဏ ဒေါ်လာ ၄၇၀၀၀ မပြည့်ဘဲ ၆၂၇. ၄၂ မှတ်ဖြင့် ဈေးပိတ်သွားသည်။ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် Myanmar Citizens Bank ၏ ရှယ်ယာများမှာ လုံးဝအရောင်းအဝယ်မရှိပေ။ စတုတ္တမြောက်ကုမ္ပဏီမှာ မကြာခင်ကမှ စာရင်းဝင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
စတော့အိတ်ချိန်းမှ ဘလောက်တခုအကွာအဝေးရှိ သူ၏ရုံးခန်းအတွင်းမှ မာတင်ဇန်၏ဖုန်းသံ မြည်လာသည်။ အမှာစာ တင်သွင်းသော ဖောက်သည်ဖြစ်မည်ထင်ပြီး သူအနည်းငယ် စိတ်လှုပ်ရှားသွားသည်။
ခဏအကြာတွင်မူ သူ၏မျှော်လင့်ချက်များ ကျဆင်းသွားသည်။ “သူက စတော့ဈေးကွက်ထဲက ငွေတွေပြန်ထုတ်ပြီး ကားဟောင်းဈေးကွက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင် ကောင်းမလားလို့သိချင်နေတာ” ဟု မစ္စတာဇန်က ပြောသည်။
အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်မှာမူ ဒေါင်းဂျုံးအညွှန်းကိန်း Dow Jones Industrial Average ၂၀၀၀၀ မှတ်နား ကပ်လာပြီး ရှယ်ယာများကို ထုတ်ရောင်းနေကြသည်။ သို့သော် ဒေါ်လာဈေးတက်ပြီး ငွေကစားသူများကို ငွေကြေးမှောင်ခို ဈေးကွက်က စွဲဆောင်ထားသဖြင့် ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံး စတော့အိတ်ချိန်းများဖြစ်သော လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် မြန်မာတို့တွင် အရောင်းအဝယ် ရပ်တန့်နေသည်။
နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းမှာမူ အရောင်းအဝယ်အဖြစ်ဆုံးနေ့များတွင် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၀၀ ခန့် အထိ ကိုင်တွယ်ရသောကြောင့် ကုန်သည်များမှာ espresso ကော်ဖီပြင်းသောက်ပြီး အားယူကြရသော်လည်း ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ စီကျူရတီ ကုမ္ပဏီများ၏ရုံးခန်းများမှ ဖောင်တိန်အချို့ ကလစ်အချို့မှလွဲပြီး အကြီးအကျယ် လူသူကင်းမဲ့နေသည်။ မြန်မာစတော့ဈေးကွက်မှာ မတ်လက စတင်ကုန်သွယ်ချိန်မှစပြီး ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းနေသည်။
မစ္စတာဇန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ထုံးစံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော အဖြူရောင် လည်ကတုံးရှပ်နှင့် လုံချည်ကို ဝတ်ကာ သူ၏နေ့များကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် အတင်းအဖျင်းပြောရင်း သို့မဟုတ် ရုံးခန်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်သော ဖောက်သည်များနှင့် ထွေရာလေးပါးပြောရင်း အချိန်ဖြုန်းသည်။ ကျန်အချိန်များတွင်မူ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် မစ္စတာဇန်သည် ဖောက်သည်သစ်ရှာရန် ဖုန်းလျှောက်ဆက်သည် သို့မဟုတ် လူထုကို စတော့ ဈေးကွက်အကြောင်း ပညာပေးရန် သူ တည် ထောင်ထား သောဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် အလုပ်လုပ်သည်။
“တခါတခါ စတော့အိတ်ချိန်း ဘယ်လိုလည်ပတ်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေ ကျနော်တင်တယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ တွေအနေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာ ရှင်းပြတာတွေ တင်တယ်။ တခါတခါ ဆောင်းပါးတွေရေးတယ်။ ပြည်သူတွေ စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး ဘာပဲလိုလို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတာ သက်သက်ပါပဲ” ဟု သူ ရှင်းပြသည်။
စတော့အိတ်ချိန်းကလည်း မည်သူမဆို ကြည့်ရှုလေ့လာရန် စာကြည့်တိုက်ငယ်တခု ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ စာအုပ်များတွင် ဝါရင်ဘူးဖက် အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ စတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်ခြင်း စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် မပြောကောင်းပြောကောင်း James Rickards ၏ ငွေကြေး၏ဈာပန၊ ရောက်လာတော့မည့် နိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း “The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System အထိ ပါသည်။ လာရောက်လှန်လှောသူ မည်သူ့ကိုမျှ မတွေ့ရပေ။
ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများကုန်သွယ်မှု မကြိုက်သောကြောင့် မဟုတ်ပေ။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ နောက်ဘက်နားရှိ သံဆူးကြိုးများနှင် တိုရိုတာဆီဒင်ကားစုတ်တစီးအနားတွင် လူ ၁၅၀ ခန့်သည် ဒေါ်လာမှောင်ခိုဈေးကို ရေးမှတ်နေကြရင်း ဖုန်းများဖြင့် အော်ဟစ်စကားပြောနေကြသည်။
မကြာသေးမီက မြန်မာကျပ်ငွေ စံချိန်တင် ဈေးကျဆင်းပြီး ယခင်နှစ်လယ်ကထက် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းကာ တဒေါ်လာလျှင် ၁၃၈၀ ကျပ်နီးပါးရှိလာသောအခါ မှောင်ခိုငွေဈေးကွက်မှာ လွန်စွာအလုပ်ဖြစ်လာသည်။ အနီးရှိ ဈေးသည်များကလည်း ငွေကုန်သည်များ အစာပြေစေရန် သို့မဟုတ် နိုးကြားနေစေရန် မြေပဲ သို့မဟုတ် စီးကရက်များကို လှည်းများဖြင့် ရောင်းချပေးကြသည်။
“ကျပ်ငွေတန်ဖိုးက အရမ်းမြန်မြန်ကျဆင်းနေတော့ ဈေးကောင်းရဖို့ ဖိအားက တနေ့ထက်တနေ့ များများလာတယ်။ ၁၅၀၀ ကျပ်အထိတောင် ကျနိုင်သေးတယ်လို့ တချို့က ထင်နေကြတယ် “ ဟု ကိုဝင်းစိန် အမည်ရှိ ကုန်သည်တဦးက ဖုန်းကို ရင်ဘတ်နားတွင် ကိုင်ထားရင်း ပြောသည်။
အခြား ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် မြန်မာသည် စတော့အိတ်ချိန်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းကို အဆင့်အတန်းတခုနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွန်ခဲ့သောတနှစ်ကျော်က နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးနောက် စီးပွားရေး လမ်းဖွင့်လာခြင်း၏သင်္ကေတဟု မြင်သည်။
“ကျနော်တို့ဟာ ခေတ်နောက်ကျတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တောဘူးဆိုတာ ကမ္ဘာကို ကြေညာနိုင်ပါပြီ” ဟု ဘဏ္ဍာရေးဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက စတော့ဈေးကွက်ဖွင်ပွဲနေ့တွင် ပြောသည်။
ပထမဆုံး စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းစု First Myanmar Investment, or FMI တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အလုအယက် လာရောက်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆဲလ်ဖုန်းကွန်ရက်များ အနက်တခုကို ကူညီတည် ထောင်ပေးပြီးနောက် ရန်ကုန်ရှိ KBZ Stirling Coleman Securities တွင် ယခင်နှစ်က စတင်ပြီး စတော့ရှယ်ယာပွဲစား ဖြစ် လာသော မစ္စတာဇန်က ပြောပြသည်။
“လူတန်းကြီးတွေက တံခါးပေါက်ကို ကျော်ပြီး လမ်းမအထိရောက်နေတာ။ သူတို့ ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာ မေးစရာ တောင်မလိုဘူး။ သူတို့အားလုံးက ဝယ်ချင်နေကြတာ။ သူတို့က ဘယ်ဈေးလဲဆိုတာပဲ မေးကြတယ်” ဟု မစ္စတာဇန်က ပြောသည်။
သူနှင့် သူ၏ KBZSC (KBZ Stirling Coleman Securities)တို့သည် နံနက် ၇ နာရီ သို့မဟုတ် ထိုထက်စောစောတွင် အလုပ်စတင်ရပြီး ရှယ်ယာသစ်ဝယ်လိုသူများ အားလုံးကို တနေ့လျှင် ၁၂ နာရီအထိ မှတ်ပုံတင်ပေးနေရသည်။
စတော့ဈေးကွက် ပထမဆုံးနေ့က FMI ရှယ်ယာဈေးမှာ အဖွင့်ဈေး ၃၁၀၀၀ ကျပ်မှ ၄၁၀၀၀ ကျပ်သို့ မြင့်တက်သွားကာ အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိုကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်သူ Serge Pun ကလည်း နေ့စဉ်ဈေးကွက် အဖွင့်အပိတ် အချက်ပြတီးခတ်သည့် ကြေးခေါင်းလောင်းကြီးကို ပွေ့ပိုက်ကာ အောင်ပွဲခံခဲ့သည်။
ဒုတိယမြောက်စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီမှာ ရန်ကုန်မြို့အနီးတွင် စက်မှုဇုန်ကြီးတခုကို စီမံသည့် မြန်မာသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် Myanmar Thilawa SEZ Holdings ဖြစ်ပြီး ရှယ်ယာဈေးများ ကျပ် ၅၀၀၀၀ မှ ကျပ် ၇၀၀၀၀ အထိတက်သွားသည်ကို ကြုံ ခဲ့ရသည်။
“အဲဒီတုန်းက အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာဗျ” ဟု ထိုကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးထွန်းမောင်လှိုင်က ပြော သည်။ “Wall Street ရုပ်ရှင်ထဲက အတိုင်းပဲ။ ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်း လောဘက ကောင်းတယ်လေ” ဟု သူ ဆက်ပြော သည်။
သို့သော် သိပ်ကြာကြာမခံခဲ့ပေ။ ရှယ်ယာနှစ်ခုလုံး ဈေးများပြန်ကျပြီး FMI က ၃၂၀၀၀ ကျပ်၊ ထိုမှ ၁၄၀၀၀ ကျပ်အထိ ဆက်လက်ကျဆင်းပြီး ထိုဈေးအတိုင်းသာရှိတော့သည်။ တတိယမြောက်ကုမ္ပဏီ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှာ လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လစတင်ကုန်သွယ်ချိန်မှစပြီး ဈေးမလှုပ်သလောက်ပင်ဖြစ်လာကာ အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ အမေရိကန်စတော့အိတ်ချိန်း ဘက်ရောက်သွားပြန်သည်။ သောကြာနေ့က စတော့အိတ်ချိန်း စတင်ဝင်ရောက်လာသော ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်မှာ ရှယ် ယာဈေး ၅၀၀၀ ကျပ်ကျပြီး ထိုနေ့က အောက်ဆုံးကန့်သတ်ထားသောဈေး ၃၄၀၀၀ ကျပ်သို့ရောက်သွားသည်။
စတော့အိတ်ချိန်းသည် မြန်မာအစိုးရ၊ Japan Exchange Group နှင့် Daiwa Institute of Research တို့၏ ဖက်စပ် လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် ဆက်လက်ရှင်သန်သင့်သည်။ စတော့ဈေးကွက်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ခွင့်ပြုမည့် ဥပဒေသစ် ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာကို မျှော်လင့်နေကြောင်း ဈေးကွက်မန်နေဂျာ ကိုမင်းသူက ပြောသည်။
အဖွဲ့အစည်းလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ဝင်ရောက်လာရန်လည်း စီးပွားရေးပညာရှင်များက မျှော်လင့်နေကြသည်။ ထိုသို့ မျှော်လင့်နေသောအဖွဲ့လိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတွင် အရက်ချက်လုပ်ငန်းများ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ဆိုင်သော မြန်မာစစ်တပ်ပင် ပါဝင်သည်။
လတ်တလောတွင်မူ စတော့အိတ်ချိန်းအနီး ပြောနေကြသောစကားများမှာ ကားဟောင်းများ ဈေးတက်သွားစေသော အစိုးရသစ်၏ ဂျပန်ကားဟောင်းတင်သွင်းမှု ကန့်သတ်သောစည်းမျဉ်းသစ်များအပေါ် အာရုံစိုက်နေသည်။
“လူတွေက အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ ဇာတ်လမ်းတွေကို အမြဲမျှော်နေကြတာ၊ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်မှာတော့ ဇာတ်လမ်းက စတော့ရှယ်ယာမဟုတ်သေးဘူး၊ ကားဟောင်းတွေပဲ ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
(The WallStreet Journal သတင်းစာပါ What Do Traders at Myanmar’s Stock Exchange Do All Day? Nothing. ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
James Hookway ...